Garsooraha Federaalka ayaa joojiyay waajibaadka tallaalka COVID-19 ee United Airlines
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Garsooraha Federaalka ayaa joojiyay waajibaadka tallaalka COVID-19 ee United Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Garsooraha Federaalka ayaa joojiyay waajibaadka tallaalka COVID-19 ee United Airlines.
Garsooraha ayaa amray amar ku-hakin ku-meel-gaar ah oo ku saabsan United Airlines, isaga oo ka hor-istaagaya shirkadda inay dhaqan-geliso waajibaadkeeda tallaalka COVID-19 ee shaqaalaha iyo dhigidda shaqaalaha codsaday ka-dhaafitaan fasax aan la bixin.
Garsooraha Degmada Mareykanka Mark Pittman ayaa ka jawaabay fal dacwad ah oo ay keeneen dacwoodaha iyo kabtanka United Airlines David Sambrano, oo deggan Waqooyiga Texas.
Pittman wuxuu amar ku bixiyay in si kumeelgaar ah loo xakameeyo United Airlines, taasoo ka hor istaagtay shirkadda inay fuliso waajibaadkeeda tallaalka shaqaalaha.
Guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa soo saaray amar fulineed oo ka mamnuucaya hay'ad kasta oo ka tirsan Texas inay ku amarto tallaallada Covid-19 shaqaalaha ama macaamiisha.
Garsooraha Degmada Mareykanka Mark Pittman ayaa ka jawaabay dacwad federaal ah oo ka dhan ah United Airlines oo ay soo gudbiyeen lix ka mid ah shaqaalaha diyaaradda isagoo amar ku siiyay shirkadda inay si ku-meel-gaar ah u joojiso waajibaadkeeda tallaalka COVID-19 kaasoo gelin doona shaqaalaha aan la tallaalin fasax aan mushaar lahayn.
Pittman wuxuu soo saaray amarkiisa isaga oo ka jawaabaya tallaabo fasal oo uu keenay dacwoodaha iyo United Airlines kabtan David Sambrano, oo deggan Waqooyiga Texas.
Sambrano wuxuu ka mid ahaa lix shaqaale ah oo gudbiyay dacwad federaal ah oo ku dooday in ay jirto qaab takoor ah oo ka dhacay shirkadda diyaaradaha ee Chicago; waxay "ka codsadeen meeleyn diimeed ama caafimaad oo ka timid waaxda United ee ah in shaqaalaheeda ay qaataan tallaalka COVID-19."
Xaakimku wuxuu amray amar ku -hakin ku -meel -gaar ah United Airlines, ka horjoogsanaya shirkadda inay fuliso waajibaadkeeda tallaalka COVID-19 ee shaqaalaha iyo dhigidda shaqaalaha codsaday ka-dhaafitaan fasax aan la bixin. Amarka xayiraadda ayaa dhacaya 26 -ka Oktoobar
Shaqaalaha, oo cabashadooda soo gudbiyey 21 -kii Sebtembar, waxay ku doodeen in gelinta shaqaalaha fasax aan mushahar lahayn aysan ahayn hoy macquul ah, laakiin ay tahay “tallaabo shaqo oo xun” sidaas darteedna ay tahay takoorid.
Sambrano laftiisu wuxuu codsaday ka-dhaafitaan caafimaad, isagoo ka soo kabsaday COVID-19. Wuxuu sheegay in codsigiisii ​​ay diideen nidaamka hoyga ee internetka ee United.
United Airlines waxay ku dhawaaqday 6-dii Ogosto inay u baahan doonto dhammaan 67,000 oo ka mid ah shaqaalaheeda fadhigoodu yahay Mareykanka inay helaan jab. Waqtigii lagu dhawaaqay, diyaaradda ayaa soo jeedisay in ku dhawaad ​​90% duuliyeyaasha iyo 80% kalkaaliyeyaasha duulimaadka durba la tallaalay. Waxay sheegtay in shaqaalaha tirada yar ee diiday tallaalka la gelin doono fasax aan mushahar lahayn.
Shirkadda diyaaraduhu waxay leedahay “waxay samaysaa dadaal iimaan leh si loo maareeyo badbaadada goobta shaqada iyo bixinta meeleyn macquul ah iyada oo la eegayo duruufo aan hore loo arag oo si dhaqso leh u soo kordhaya” waxayna soo gudbiyeen mooshin lagu burinayo kiiska.
Dhanka kale, Guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott wuxuu soo saaray amar fulin ah oo ka mamnuucaya hay'ad kasta oo ku taal Texas, oo ay ku jiraan ganacsiyada gaarka loo leeyahay, inay ku amraan tallaallada COVID-19 shaqaalaha ama macaamiisha.